TIMIR SIIB TIINTIIN ABUUR TABTEENA WAAYE | Lughaya.Com
TIMIR SIIB TIINTIIN ABUUR TABTEENA WAAYE
TIMIR SIIB TIINTIIN ABUUR TABTEENA WAAYE waa shirib waxaa tiriyey nin Reer Muqdisho ah, kadib markii intay Siyaad Barre eryeen ay magaaladii iyo taladii Mooryaani la wareegtay, oo meelwalba biliqo, kufsi iyo dil ka bilowday.
Shiribka dulucdiisu waa (geed midho kuu dhalaya jar oo geed qodox ku muda leh ku bedelo), tan waxaa la mid ah Xukuumada Somaliland oo u muuqata in marka ay isbedel samaynayso aanay u jeedin wax ha sii wanaagsanaadeen.
Tusaale hadaan u soo qaadano Wasaaradda Arimaha Gudaha Somaliland waxaa laga bedelay Cali Warancade oo ahaan jiray nin ugu yaraan todobaadkii mar hadla, oo markaas laga dheehan jiray xaalada nabadgelyo ama amaan ee Somaliland ku jirto, taasoo deganaasho siin jirtay shacabka Somaliland iyo beesha Caalamkaba, Cali Warancade wuxuu ahaa nin 1000 jeer ka waxqabad badan Wasiirka lagu bedelay Yaasiin Xaaji Maamuud Xiir (Yaasiin Faratoon).
Iska daa waxqabad kale Gobolkii uu ka soo jeeday ee Sool waxaa habeen walba shaashada TV-yada lagu arkaa dadkii degaanka oo ka cabanaya Amaandaro baahday iyo waxqabad la’aan, shacabkii oo laflaf loo kala qaybinayo, iyadoo ay muuqato in ilaa maalintii la magacaabay ay kalsooni daradii beeluhu kor u sii kacayso, beelihii dib u heshiisiinta u baahnaa oo sii kala fogaanaya, Cusbitaalka Hargeysa qof dhaawac xabadeed qaba lama weydiiyo meesha laga keenay, waa layska gartaa in Sool laga keenay.
Madaxweyne Siilaanyo waxaa la gudboon in Wasaaradaha halbowlaha u ah jiritaan nabadgelyada lagu xulo kartida iyo waxqabadka Masuulka, haddiise lagu khaldamo aan lagu eegan ee si deg deg ah wax looga qabto. Maanta Isbedel lagu sameeyo Wasaarada Arimaha Gudaha Somaliland waxaa ugu baahi weyn shacabka Gobolka Sool oo ay dantoodu ku jrto inay midnimo iyo nabadgelyo u wada noolaadaan.